Mushure mekutenga magirazi ezuva, pane zvisingawanzo teerera kune ekuchengetedza magirazi ezuva. Pamwe vamwe vanhu vanofunga kuti ini ndinongozvipfeka zhizha rino, uye vanhu vazhinji vanofunga kuti ivo vanotenga magirazi ezuva chete kuti vadzivirire kubva kumagetsi e-ultraviolet uye fashoni. Kana ari mamwe magirazi ezuva, ivo havazozvifunge ...
Maitiro Ekutora Magirazi eChiso Chako Rakaumbwa
Wakambove nedambudziko kuyedza kufunga kuti nderupi furemu rakanakira kumeso kwako? Zvakanaka une mhanza! Nemutungamiriri wedu mudiki, iwe unozodzidza kuti pane furemu yemunhu wese - uye isu tinogona kukuudza iwe chakanyanya kukodzera iwe! Ini ndine chimiro cheuso. Zvichida une ...
Zhejiang Baolai Boka Co, Ltd. chihombe-chihombe chakavanzika bhizimusi rekusanganisa magirazi ekugadzira, kutsvagisa nekusimudzira, kugadzira, kutengesa, uye kupinza uye kutumira kunze kwezvinhu. Kambani yedu ine mafekitori matatu munzvimbo dzepamusoro dzemhuri, 2 zvitoro mukati mekutengesa guta, mutorwa ...